- विनय कसजू
"दसैंमा घर आउँदा ऊँटका एक जोडी पाठापाठी तपाईंसँगै हवाइजहाजमा राखेर लिएर आउनू है," विकासले बालाई फोनबाट आफ्नो माग सुनायो। बाले हाँस्दै भने, "पहाडमा पनि ऊँट बाँच्छ र छोरा? खेलौना ऊँट ल्याउने भए ल्याइदिन्छु।"
ढड्डु मुसाको बकबक
कथा नसुनी मायालाई निँद लाग्दैनथ्यो । साँझ दूधभात खाएपछि ऊ ओछ्यानमा पल्टन्थी । अनि मैले उसलाई कथा सुनाउँथेँः "राजकुमारीले भ्यागुतोलाई माया गरेर म्वाई खाई । अचानक भ्यागुताको रुप फेरियो । राजकुमारीको हातबाट भ्यागुता बिलायो । उसको अगाडि सुन्दर राजकुमार उभियो । ......."
ऊ यस्तै कथा सुन्न रुचाउँथी । तर कथा टुंगिन नपाउँदै माया निदाइसक्थी । उसले पूरै कथा कहिल्यै सुन्न भ्याउन्नथी । माया निदाए पनि मैले कथा बीचैमा रोक्दिनथेँ । कोठामा मेरो कथा सुन्ने अरु पनि हुन्थे ।
मायालाई कथा सुनाउन म कोठामा पस्दा मेरो पछिपछि टाटे कुकुर र पाटे बिरालो पनि आउँथे । टाटे भुइँमा बस्थ्यो । मैले कथा सुनाउँदा ऊ मतिर र्फकन्थ्यो र बडो ध्यान दिएर सुन्थ्यो । पाटे भने कहिले ओछ्यानमाथि मायासँगै बस्थ्यो भने कहिले खाटमुनि गएर मुसालाई ढुकेर बस्थ्यो । तर कथा सुनाउन थालेपछि ऊ पनि हल्ला नगरी बस्थ्यो ।
एक दिन पानी परिरहेको थियो । अलिअलि जाडो थियो । मैले राजकुमार भ्यागुताको कथा सुनाउन थालेँ । तर कथा सुरु हुने बित्तिकै माया निदाइहाली । मलाई कथा सुनाउन अल्छी लाग्यो । मलाई पनि निँद लाग्यो ।
सपनामा पनि टाटे र पाटे दुबैले बडो ध्यान दिएर मेरो कथा सुनिरहेका थिए । मैले कथा भन्न छाडेको देखेर टाटे 'कुइँ कुइँ' करायो । पाटे पनि खाटमुनिबाट निस्केर 'म्याउँ म्याउँ' गर्न थाल्यो ।
"हुन्छ, हुन्छ । म कथा सुनाउँछु ।" मैले भनेँ । ती दुबै खुशी भए, र मतिर ध्यान दिएर हर्न थाले । मैले सुनाउन लागेको कथा तिनीहरुकै कथा थियोः
"यो घरमा आउँदा सुरुमा टाटे र पाटे खुबै झगडा गर्थे । एक अर्कालाई देखी सहँदैनथे । एक दिन टाटेको भागमा राखेको मासु पाटेले चोरेर खाइदियो । ...."
"होइन यो कुरा झुटा हो । त्यो दिन मैले मासु चोरेको थिइन । मेरो भागमा पनि मासु थिएन । दुबैको भागको मासु ढड्डु मुसाले खाएको थियो । फ्वाक्कैमा ममाथि शंका गरेर टाटेले मलाई झम्टेको हो । यस्तो झुठो आरोप लाग्यो भने टाटेलाई पनि रिस उठ्छ । उठ्दैन त टाटे ?" अचानक पाटेले आफू निर्दोष भएको कुरा सुनायो ।
"मलाई त तिमीमाथि नै शंका लागेको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यो शंका मेटिएको छैन बुझ्यौ ।" टाटे कुकुरले पाटेको कुरा पूरै पत्याएको थिएन ।
"त्यसो भए त्यो ढड्डु मुसालाई सोध । सबै कुरा थाहा भइहाल्छ ।" पाटे बिरालोले भन्यो ।
उसको कुरा टुँगिन नपाउँदै दुलोबाट ढड्डु मुसा फुत्रुक्क बाहिर निस्क्यो । ऊ बिरालोसँग सतर्क हुँदै टेबुलमाथि पुग्यो र भन्न थाल्यो, "हो, हो । त्यो दिन तिमीहरुको भागको मासु सुटुक्क खाइदिएर तिमीहरुलाई लडाएको मैले नै हो ।" यति भन्दै ऊ मज्जाले हाँस्यो ।
"कस्तो बदमास रहेछ यो । आफूले मासु खाएर हामीलाई लडाउने ?" कुकुरले ठूलाठूला आँखाले ढड्डुतिर हेर्दै भन्यो । "त्यो दिन झण्डै हामी दुबैलाई घरपेटीले घरबाट निकालेको । रातभरि बाहिर बस्नुपर्यो । किन यस्तो बदामासी गरेको ?"
मुसा फेरि जोडले हाँस्यो । उसले कम्मरमा हात राख्दै भन्यो, "तिमीहरुलाई घरपेटीले यो घरबाट निकालेको भए त मलाई हाइसँचै हुन्थ्यो नि !"
मुसाको कुरा सुनेर मलाई रिस उठ्यो । "मेरो घरमा बसेर मेरै साथीहरुलाई तैँले धम्की दिने ? पख तँलाई ।" मैले भनेँ ।
मेरो कुरा सुनेर ढड्डु मुसा फेरि हाँस्यो । उसले भन्यो, "यो घर तिम्रो हो भन्ने भ्रममा रहेछौ तिमी । तिमी यो घरमा आएको कति वर्ष भयो भन त ? हामी त यहाँ पुस्तौँ पुस्तादेखि बस्दै आएका छौँ । वास्तवमा यो घरको मालिक हामी पो हौँ । तिमी त किराया तिरेर बसेका हौ ।"
उसको कुरा सुनेर कसलाई रिस नउठला ? मैले भनेँ, "मेरै भान्छाको खानेकुरा, माछामासु चोरर मोटाएका छौ अझै मलाई नै आँखा तर्र्छौ ? धेरै फुर्ती लायौ भने तिम्रो पूरै वंशलाई धपाइ दिन्छु ।"
"भो भो धेरै धक्कु नलाऊ । सक्ने भए गरिसक्थ्यौ । बिरालो र कुकुरको मदत लिनु पर्दैनथ्यो ।" यति भनेर ढड्डु मुसा टेबुलबाट बुरुक्क उफ्रेर दुलोभित्र पस्यो । पाटेले झम्टन खोज्यो तर भेट्टाउन सकेन । 'ङ्यार्रर्र' गरेर रिस पोख्यो ।
कोठाभित्र धेरै हल्ला भएकोले मायाको निद्रा खुल्यो । उसले आँखा मिच्दै आफ्नो वरिपरि हेरी । मलाई कुर्सीमा बसेको देखेर उसले सोधी, "अनि त्यो राजकुमारीले भ्यागुतोलाई के गरी ? पूरै कथा सुनाउनुस् न ।"
"जहिले पनि त्यही भ्यागुतो राजकुमारको कथा कति सुन्ने ? नयाँ कथा छैन ?" दुलोभित्रबाट आवाज उही ढड्डु मुसाको आवाज आयो ।
ढड्डु मुसाको कुरा सुनेर माया छक्क परी । उसले भनी, "कस्तो बाठो मुसा रहेछ ! दुलोभित्र बसेर कथा सुन्दो रहेछ ।"
"मेरो छिमेकमा बस्ने मुसाहरुले टेलिभिजन हेर्छन् । यहाँ त कथा सुनेर चित्त बुझाउनु पर्छ । तर ठिकैछ । तिम्रा बालाई धेरै कथा भन्न आउने रहेछ । कथाले टेलिभिजनको धित मार्छ भने किन टेलिभिजन नै हेर्नु पर्यो र ? होइन त माया ?"
ढड्डु मुसाको चिप्लो कुरा सुनेर माया हाँसी । मेरो पनि रिस मर्यो । "तिमीलाई कस्तो कथा मनपर्छ ?" मायाले ढड्डु मुसासँग सोधी ।
"मलाई त मेरै कथा मन पर्छ नि । एउटा मुसाले कसरी जंगलको राजा सिंहलाई जोगायो भन्ने कथा तिमीले सुनेकी छौ ? अहिलेसम्म हामीले बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउन सकेका थिएनौँ । तर तिम्रो बुबाले त एक दिन मुसाहरु मिलेर कसरी बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न सफल भयो भन्ने कथाहरु पनि सुनाउनु भयो । साँच्चै तिम्रो बुबाले मुसा राजा भएको अनि मुसाको छोरा युवराज भएको कथा सुनाउनु हुन्न ?"
ढड्डु मुसाको बठ्याइँ बल्ल मैले बुझेँ । मैले भनेँ, "अब तिमी राजा भएको, तिम्रो छोरा युवराज भएको सपना नदेख । त्यो जमाना गयो । अब सबै जना मिलेर बस्न'पर्छ बुझ्यौ ?"
"त्यसो भए मुसाले गल्ती गरेको र बिरालोले मुसालाई सजाय दिएको कथा पनि लेख्न छाड ।" डढ्डु मुसाले भन्यो ।
उसको कुरा सुनेर मलाई रिस उठ्यो, "कस्तो कथा लेख्ने कस्तो नलेख्ने भनेर तिमीले मलाई सिकाउने ? म त स्वाभिमानी लेखक हुँ । मनमा लागेको कथा लेख्छु । तिमीले अह्राएको कुरा लेख्छु र ?"
"ठिकै छ । तिमीले बाघ, भालु, चितुवाको कथा लेख्छौ भने हामीलाई पनि सुन्न कर छैन । जसको कथा हो उसैलाई सुनाऊ ।" भन्दै ढड्डु मुसा दुलोभित्र हरायो ।
हाम्रो कुरा मायाले मात्रै होइन टाटे र पाटेले पनि ध्यान दिएर सुनिरहेका थिए । मुसा हराएपछि मायाले भनी, "मुसाको कुरा ठिकै त हो नि बुवा । टाटेलाई कुकुरको कथा मन पर्छ, पाटेलाई बिरालोको कथा मनपर्छ । होइन त पाटे ?"
"त्यो त हो । तर मलाई मुसाले बिरालोलाई जितेको कथा पटक्कै मन पर्दैन ।" पाटेले भन्यो ।
उसको कुरा टुंगिन नपाउँदै टाटेले थप्यो, "हो । मलाई पनि अरु पशुपंछीले कुकुरलाई हेपेको, कुकुरलाई मुर्ख बनाएको कथा मनै पर्दैन ।"
तिनीहरुको कुराले मलाई गम्भीर बनायो । मैले भने, "हेर, सबै जना आफू बाठो र बहादुर भएको कथा सुन्न चाहन्छन् । अहिलेसम्म लेखिएका कथाहरुमा यस्तै छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई जितेको, मारेको, दास बनाएका कथाहरु धरै छन् । कुराकानी र मेलमिलाप गरेर लडाइँ झगडाको समाधान गरेको कथा लेख्न बाकी नै छ ।"
"भो, भो । धेरै अर्ति उपदेश दिनु पर्दैन । लडाइँ, झगडा, ढिस्युँढिस्युँ भएन भने कसले सुन्छ तिम्रो कथा?" दुलोबाट निस्केर ढड्डु मुसाले फेरि बकबक गर्न थाल्यो । उसलाई देख्ने बित्तिकै पाटे बिरालोको कन्सिरी तातिहाल्यो । रिसले उसले आँखा देखेन । झ्वाम्म झम्टिहाल्यो । बिजुली चम्केझैँ ढड्डु मुसा दुलोभित्र लुकिहाल्यो । बिचरा पाटे भित्तामा नराम्ररी ठोक्कियो । उसको मुखमा घाउ भयो ।
"हाऊ.. हाऊ ।" पाटेको समर्थनमा टाटे जोडले भुक्न थाल्यो । माया रमाइलो मानेर हाँसिरही ।
२४ मई २००७ (२०६४ जेठ १०), विहीबार ।
"विरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने समस्याले हामीलाई कहिल्यै छोडेन । अब यो कुरामा समय खेर नफालौँ । बरु सकिन्छ भने अरु कुनै उपाय निकालौँ ।" दाह्रीवाल मुसाले जुँगा मुसार्दै भन्यो ।
"यो हामी मुसा जातिको जीवनमरणको समस्या हो । यस्तो महत्वपूर्ण समस्यालाई त्यत्तिकै छाडन कहाँ हुन्छ ?" तन्नेरी मुसाले कुरा काट्यो ।
"हामीभन्दा पहिले पनि यो विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ । बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कोसिस गर्दा धेरै मुसा सहिद भइसकेका छन् । कथंकदाचित कोही सफल भए पनि बिरालोले धेरै दिनसम्म घाँटीमा घण्टी बाँधेर बस्दैन । चुँडालेर फालिहाल्छ । यसैले अब बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने योजना छाडिदिउँ भनेको हो ।" दाह्रीवाल मुसाले आफ्नो कुरा मनाउन खोज्दै भन्यो ।
यसैबीच एउटा दुब्ले मुसाले बिरालोको नक्कल गर्दै जोडले "म्याउँ" गर्यो । सबै मुसाका कान ठाडा भए । बिरालो आयो कि भनेर सबै मुसा चनाखा भए । अनि दुब्ले मुसाले ताली बजाउँदै सबैको ध्यान आफूतिर तान्यो र बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउने नयाँ उपाय सुनायो ।
दुब्ले मुसाको कुरा सुनेर धेरैजसो मुसाहरू हाँसे । उसको कुरा धेरैले पत्याएनन् । तर दुईचार मुसाहरूले उसको र्समर्थन गर्दै भने, "दुब्लेले भनेको उपाय एक पल्ट प्रयास गरे के बिग्र्यो र ?"
अनि एक दिन दुब्लेको योजना अनुसार मुसाहरूले ठूलो सभाको आयोजना गरे । सभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा ढाडे बिरालोलाई निम्ता गरियो । टोलका अरु बिरालाहरूलाई पनि निम्तो पठाइयो ।
खिर खाने लोभले टोलका सबै बिरालाहरू मुसाहरूको सभामा भाग लिन आए । सभामा आएका बिरालाहरूलाई आयोजक मुसाहरूले स्वागत गर्दै मंचमा राखे । ढाडे बिरालोलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा बसाले भने अरु बिरालाहरूलाई उनीहरूको बल र उमेर अनुसार मेलैसँग मंचमा आसन ग्रहण गर्न लगाए । मुसाहरूले गरेको सम्मान र सभाको प्रवन्ध देखेर बिरालाहरू मख्ख परे । दाह्रीवाल मुसाको सभापतित्वमा सभाको कार्यक्रम सुरु भयो ।
र्सवप्रथम दाह्रीवाल मुसाले ढाडे बिरालोलाई माला लाएर सम्मान गर्यो । त्यसपछि मेलैसँग अरु बिरालाहरूको सम्मान गरियो । यसैबीच दुब्ले मुसाले स्वागत भाषण गर्दै भन्यो, "यो एक्काइसौँ शताब्दी शान्ति र मित्रताको शताब्दी हो । शत्रुलाई मारेर खाने र पेट भर्ने जमाना गयो । मासु खान मन लाग्यो भने मानिसहरूले आफैले काटमार गर्दैनन् । होटलबाट झिकाएर खान्छन् । अब मुसा र बिरालोले पनि पुस्तौँको शत्रुता त्यागेर मिलेर बस्नर्ुपर्छ । यसैले हामी मुसा जातिले हाम्रा मित्र बिरालाहरूलाई मेलमिलापको आह्वान गर्दै यो सम्मानको कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ ।"
दुब्ले मुसाको कुरा सुनेर मुसाहरू खुशी भए । बिरालाहरूले पनि ताली बजाएर र्समर्थन गरे । त्यसपछि मंचमा टेबुलमाथि किस्तीमा विभिन्न आकार प्रकार र रंगका घण्टीहरू सजाएर ल्याइयो । अनि सभापति दाह्रीवाद मुसाले उभिएर बिरालाहरूलाई अनुरोध गर्दै भाषण गर्न थाल्यो ।
उसले भन्यो, "एउटै घरमा बसे पनि आजसम्म हामी मुसा र बिरालाहरू आपसमा शत्रुता गरेर बसेका थियौँ । आजदेखि हामी मुसा जाति बिरालाहरूलाई परम मित्र सम्झने र सम्मान गर्ने घोषणा गछौँ र मित्र बिरालाहरूले पनि हाम्रो मित्रताको प्रस्तावलाई सम्मान गर्नु हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।"
त्यहाँ उपस्थिति मुसा र बिराला सबैले ताली बजाएर मुसाहरूको घोषणाको स्वागत र र्समर्थन गरे । त्यसपछि दाह्रीवाल मुसाले बडो विनम्र भएर बिरालाहरूसँग अनुरोध गर्यो, "सम्माननीय मित्र बिरालाहरू हो । हामी मुसा जातिको यो घोषणाको चिनो र मित्रताको प्रतीकको रूपमा हामीले तपार्इँहरूका लागि सानो उपहार टक्र्याउन चाहन्छौँ । विश्वास छ यहाँहरूले हाम्रो यो प्रेमको चिनोलाई सँधै आफ्नो घाँटीमा सुशोभित गरेर हाम्रो मित्रतालाई सम्मानित र दिगो बनाउनु हुनेछ ।"
दह्रीवाल मुसाको कुरा टुँगिन नपाउँदै चिटिक्क सजिएका राम्रीराम्री मुसीहरूले एकएक वटा घण्टी लिएर अतिथि बिरालाहरूको घाँटीमा बाँधिदिए । पाहुना बिराला र उपस्थित मुसाहरू सबै प्रशन्न देखिए ।
त्यसपछि प्रमुख अतिथि ढाडे बिरालोले उभिएर भाषण गर्न थाल्यो । उसले भन्यो, "मित्र मुसाहरूले व्यक्त गर्नु भएको भावनाबाट हाम्रो पनि आँखा खुलेको छ । अब मित्रताको युग सुरु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ । मित्र मुसाहरूले दिनुभएको यो सम्मान र उपहारको हामीले सम्मान गर्नेछौँ । यसलाई जीवनभरि आफ्नो घाँटीमा धारण गर्नेछौँ । बिरालो र मुसाबीचको मित्रतालाई दिगो बनाउन हामीले पनि कोशिस गर्नेछौँ ।"
ढाडे बिरालोको कुरा सुनेर मुसाहरूले घेरै बेरसम्म ताली बजाए र खुशी जनाए । कार्यक्रमको आखिरमा मुसाहरूले बिरालाहरूलाई पेटभरि खिर ख्वाएर बिदा गरे ।
दुब्ले मुसाको बुद्धि देखेर सबै मुसा दंग परे । उनीहरूले दुब्लेलाई काँधमा बोकेर टोलभरि घुमाए र मिठामिठा कुरा खान दिए । त्यस दिनदेखि बिरालाहरूले जहाँ जाँदा पनि घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याएर जान थाले र मुसाहरू पनि निर्धक्क भएर घुम्न थाले ।
खेलाडी गुफी र रोबोट
डिज्नेल्याण्ड कार्टुन कथाका पात्रहरूमा आधारित
अनुवादकः विनय कसजू
दौड सुरु भइसकेको थियो । खेलाडीहरूलाई उत्साहित गर्न दर्शकहरूले ताली बजाएर हल्ला गरिरहका थिए । दौड सकिने अन्तिम रेखामा फोटो पत्रकारहरू फोटो खिच्न तयार थिए ।
खेलाडी गुफी बेतोडसँग दौडँदै लाइनमा आइपुग्यो । उसले दौड प्रतियोगिता जित्यो ।
"गुफी साँच्चै महान खेलाडी हुन् ।" गुफीलाई रुचाउने दर्शक चिच्यायो ।
"ऊ बतासझैँ दगुर्छ ।" अर्को करायो ।
तर त्यहाँ गुफीले जितेकोमा खुशी नहुने एक जना थियो । त्यसको नाम पिटे थियो । ऊ दुष्ट थियो ।
मेयरले गुफीलाई पुरस्कार दिएको पिटेले हेरिरहेको थियो । मेयरले गुफीलाई पदकसँगै ठूलै रकमको चेक पनि दियो ।
"गुफीले पाउने त्यो अन्तिम रकम हो ।" पिटेले मनमनै भन्यो, "अब हुने दौडमा यो चेक मैले पाउनेछु ।" भन्दै पिटेले खुट्टा बजार्यो ।
पुरस्कार बाँडेपछि मेयरले लामो भाषण गर्न लागेका थिए । तर गुफीले "मेरो अलिकति काम बाकी छ ।" भन्दै त्यहाँबाट हिँड्यो ।
सबैभन्दा पहिले ऊ बैँकमा गयो । उसले चेक साटेर नगद लियो । त्यसपछि ऊ खेलकुदका सामान बेच्ने पसलमा गयो । त्यहाँ उसले रकेट, व्याट, बल र खेलका थुप्रै सामान किन्यो । ती सामानको भारी बोकेर त्यहाँबाट ऊ दगर्ुर्दै एउटा घरमा पुग्यो ।
त्यो घरमा आमाबा नभएका टुहुरा केटाकेटीहरू बस्थे । "हेर त केटा हो मैले तिमीहरूको लागि के ल्याएको छु ।"उसले ती केटाकेटीहरूलाई भन्यो ।
खेलाडी गुफी उनीहरूकहाँ जहिले आए पनि उनीहरू खुशीले उफ्रन्थे । गुफी उनीहरूको सबैभन्दा असल साथी थियो ।
गुफीले सबै केटाकेटीलाई खेलकुदका सामान वाँड्यो । उनीहरूले गुफीलाई धन्यवाद दिए । टुहुरा घरका व्यवस्थापकले पनि उसलाई धन्यवाद दियो ।
"अर्को साता फेरि दौड प्रतियोगिता हुँदैछ ।" खेलाडी गुफीले भन्यो, "त्यसमा जितेँ भने पुरस्कारको रकमले केटाकेटीलाई खेल्नको लागि अगाडिको चौर किनिदिन्छु । त्यति भएपछि उनीहरूलाई उफ्रन खेल्न ठाउँ पुग्छ ।"
तर दुष्ट पिटेले अर्कै चाल चल्ने तयारी गर्दै थियो । उसले एउटा रोबोट बनाउँदै थियो । रोबोट तयार भएपछि त्यसलाई गुफीसँग दौडाउने उसको बिचार थियो ।
"मेरो रोबोट साँच्चैको खेलाडीजस्तै देखिने छ । त्यसले सबैलाई झुक्याउने छ ।" पिटे मनमनै हाँस्यो ।
अर्को साता खेलाडीहरू मैदानमा भेला भए । खेलाडी गुफीलाई हेर्न त्यहाँ दर्शकहरूको भीड लाग्यो । उनीहरू गुफी दौडेको हेर्न यति आत्तिएका थिए कि दुष्ट पिटेले ल्याएको नयाँ खेलाडीतिर उनीहरूको ध्यानै गएन ।
"उसको नाम जिप्पी हो ।" पिटेले दौड प्रतियोगिताका निर्ण्ाायकहरूलाई भन्यो ।
खेलाडीहरू दौडने तयारीमा लाइनमा उभिएको बेलामा पिटे पर्खालको आडमा लुक्यो । ऊ रोबोटलाई टाढैबाट चलाउने रिमोट कन्ट्रोलको बटन थिच्न तयार भएर बस्यो । उसलाई कसैले नदेखोस् भन्ने कुरामा ऊ र्सतर्क थियो ।
"एक, दुइ, तीन" को आवाजसँगै खेलाडीहरू बेतोडले दगुर्न थाले ।
खेलाडी गुफी दौड जित्ने कुरामा ढुक्क देखिन्थ्यो । उसले टुहुरा केटाकेटीको बारेमा सोच्दै थियो । टुहुराहरूको लागि खेल्ने चौर किन्न यो दौड जित्नैपर्छ भन्ने उसको मनमा थियो ।
उता पिटे पर्खालको कुनाबाट बाहिर निस्केर रोबोटलाई दौडाउने प्रयास गर्दैथियो । हरेक कदममा जिप्पी रोबोटभन्दा गुफी अगाडि दगुर्दैथियो ।
खेलाडीहरू अन्तिम रेखामा पुग्नै लागेका थिए । पिटे करायो, "तैँले जित्न पाउन्नस् गुफी ।" यति भन्दै पिटेले रोबोटलाई अझै बेतोडले दौडाउन कन्ट्रोलरको एक्ट्रा फास्ट बटन थिच्यो । अचानक जिप्पी रोबोट हावाजस्तै सुइँइँइँय दौडँदै अन्तिम रेखा नाध्यो र दौड जित्यो ।
खेलाडी गुफी दुःखी भयो । दौड हारेपछि टुहुरा केटाकेटीका लागि खेल्ने चौर किन्न सकिन्नथ्यो । तैपनि सच्चा खेलाडी भएको हुनाले उसले जिप्पीलाई बधाइ दियो ।
मेयरले पनि जिप्पीसँग हात मिलाउँदै भन्यो, "लौ लेऊ त्रि्रो पदक र चेक ।"
मेयरले जिप्पीलाई पदक र चेक दिनै लागेको बेलामा पिटे आइपुग्यो । उसले बीचैमा पदक र चेक लिँदै चिच्यायो, "यो म लिन्छु । म उसको म्यानेजर हुँ ।"
पिटेले रोबोटलाई यति जोडले दौडन लगाएको थियो कि त्यसका पर्ुजाहरू भाँचिएर टुक्राटुक्र होला भन्ने उसलाई डर थियो । यसैले उसले पुरस्कार लिन यस्तो हतार गरेको थियो ।
चेक र पदक हात पारेपछि पिटेले जिप्पीलाई लिएर दगुर्न थाल्यो ।
अचानक रोबोटको कानबाट धुवाँ निस्कन थाल्यो । अनि त्यसभित्रको स्प्रिङ उछिटि्टयो । त्यसपछि रोबोटको टाउको खस्यो ।
"त्यो त खेलाडी होइन रोबोट हो ।" मेयरले भने ।
टुक्रिएको रोबोटलाई त्यहीँ छाडेर पदक र चेक लिएर पिटे त्यहाँबाट भाग्न खोज्यो ।
मेयरले उसको बाटो छेक्दै भन्यो, "तँ बेइमान भाग्न पाउन्नस् । रोबोटलाई खेलाडीसँग भिडाउन पाइन्न । तैँले बेइमानी गरिस् ।"
अनि मेयरले उसको हातबाट पदक र चेक खोसेर लिए । उनले खेलाडी गुफीलाई चेक र पदक दिँदै घोषणा गरे, "वास्तविक विजेता तिमी हौ ।"
"जहिले टि्रक गरे पनि म समातिन्छु ।" भन्दै पिटेले रिसले भुइँमा खुट्टा बजार्यो ।
दौड जितेपछि खेलाडी गुफीले आफ्नो वचन पूरा गर्यो । उसले पुरस्कारको रकमले खेल्ने चौर किन्यो । अनि उसले टुहुरा घरका व्यवस्थापकलाई भन्यो, "अब बल्ल केटाकेटीले मन फुकाएर खेल्न पाउने भए ।"
व्यवस्थापकले उसको कुरामा सहमति जनाउँदै भन्यो, "गुफी, तिमी साँच्चै नै केटाकेटीका सबैभन्दा असल साथी हौ । तिमीजस्तो साथी पाउनु ठूलो भाग्य हो ।"
राजुको होमवर्क कसले गरिदियो ?
अनु. विनय कसजू
राजुले आफ्नो होमवर्क कहिल्यै गर्दैनथ्यो । "कस्तो बोर लाग्छ ।" उसले भन्थ्यो । ऊ जहिले पनि खेलिरहन्थ्यो । उसका शिक्षकहरूले भन्नुहुन्थ्यो, "होमवर्क गरेनौ भने तिमीले केही पनि सिक्ने छैनौ ।" हुन पनि हो, उसलाई केही पनि आउँन्नथ्यो ।
तर उसले के गरोस् ? उसलाई होमवर्क भन्ने बित्तिकै दिक्क लाग्थ्यो ।
एक दिन राजु कोठामा एक्लै खेलिरहेको थियो । कोठाको कुनामा उसको बिरालो खेलौनासँग खेलिरहेको थियो । उसलाई पनि त्यो खेलौनासँग खेल्न मनलाग्यो । उसले अचानक त्यो खेलौनालाई च्याप्प समात्यो । तर त्यो त खेलौना होइन रहेछ । त्यो त खेलौनाजत्रो ख्याक पो रहेछ । उसको जिउ भालुको जस्तो कालो रौँले ढाकिएको थियो ।
राजुको मुठ्ठीमा परेको सानो ख्याक आत्तियो । उसले राजुसँग निहोरा गर्दै भन्यो, "मलाई त्यो बिरालोबाट जोगाऊ । तिमीले जे भन्छौ म मान्छु ।"
उसको कुरा सुनेर राजु छक्कै पर्यो । सेतो भूतलाई मुठ्ठीमा पार्नसक्यो भने भाग्यमानी भइन्छ भन्ने उसले हजुरआमाबाट सुनेको थियो । उसलाई आफ्नो मुठ्ठीमा ठूलो भाग्य परेजस्तो लाग्यो ।
"मेरो सबै होमवर्क यही ख्याकबाट गराउन पाए त सन्चै हुन्थ्यो । होमवर्कमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउन पाए त जाँचमा पहिला हुने थिएँ ।" राजुले बिचार गर्यो । उसको जाँच आउन एक महिनाजति बाकी थियो । उसले ख्याकलाई भन्यो, "लौ मेरो सबै होमवर्क गरिदियौ भने म तिमीलाई छाडिदिन्छु ।"
राजुको कुरा सुनेर त्यो सानो ख्याक आत्तियो । उसले खुट्टा बजार्दै भन्यो, "हे भगवान ! कस्तो आपत आइलाग्यो । जे भए पनि बोलेको कुरा त पूरा गर्नैपर्यो ।"
ख्याकको कुरा सुनेर राजु दंग पर्यो ।
बचनको पक्का त्यो सानो ख्याक राजुको होमवर्क गर्न कस्सियो । उसले राजुको किताब र नोटहरू पढ्न थाल्यो । एकछिन पढेपछि उसलाई समस्या पर्यो । किताबमा उसले नजानेका धेरै शब्दहरू थिए । उसले राजुसँग भन्यो, "तिम्रो होमवर्क त म गर्छु तर तिमीले मदत नगरी हुँदैन । किनभने मलाई कतिपय शब्द थाहा छैन । तिनको अर्थ तिमीले बताइदिनुपर्छ ।"
राजुले पनि खुशीसँग उसलाई मदत गर्छु भुन्यो ।
ख्याकले पढदै जान्थ्यो र बेलाबेलामा राजुसँग शब्दको अर्थ सोध्थ्यो । कुनै शब्दको अर्थ राजुलाई थाहा नभए ख्याकले उसलाई डिक्सनेरी हेर्न लगाउँथ्यो । आधुनिक ज्ञानविज्ञानका शब्दहरू उच्चारण गर्न उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो । त्यस्ता विषय राजुले उसलाई सिकाउँथ्यो । कुनैकुनै विषयमा त राजुले पूरै पाठ पढेर उसलाई सुनाउनुपर्थ्र्यो । जे होस् सानो ख्याक आफ्नो काममा इमानदारीसाथ लागेको थियो ।
तर गणितको होमवर्क गर्ने बेलामा सानो ख्याकलाई ठूलै समस्या पर्यो । उसलाई सामान्य जोडघटाउ र गुणाभाग मात्रै आउँथ्यो । गणितका फर्मुुलाहरू उसलाई थाहै थिएन । उसले राजुसँग मदत माग्यो । "मेरो छेउमा बसेर मलाई गणित सिकाउ त । अलिअलि गाइड गर्यौ भने मैले टिपिहाल्छु ।" उसले भन्यो ।
इतिहासको होमवर्क गर्ने बेलामा त्यो सानो ख्याक साह्रै दिक्क भयो । किनकि उसलाई भूतप्रेतको इतिहासमात्रै थाहा थियो । मानिसको इतिहास कत्ति पनि थाहा थिएन । यसैले उसले राजुलाई पुस्तकालयमा गएर इतिहासका किताब ल्याउन लगायो । उसले भन्यो, "यी सबै किताब मैले मात्रै पढ्न सक्दिन । तिमीले पनि पढन सघाउनुपर्यो ।"
यसरी दिनदिनै त्यो सानो ख्याकले राजुको होमवर्क गर्न मेहनत गर्यो । उसले राजुलाई पनि फुर्सत दिएन । नजानेको कुरा सोधिहाल्थो । राती अबेससम्म पढ्थ्यो र राजुलाई पनि सुत्न दिँदैनथ्यो । बिचरा राजु आँखा मिच्दै स्कुल जान्थ्यो । स्कुलबाट र्फकने बित्तिकै सानो ख्याकलाई मदत गर्न बस्थ्यो ।
आखिरमा स्कुलको अन्तिम दिन पनि आयो । होमवर्क पनि सकियो । सानो ख्याकलाई बिदा दिन करै लाग्यो ।
राजुले सबै विषयमा पहिलो श्रेणीको नम्बर पायो । उसका सबै साथीहरू छक्कै परे । उसका शिक्षकहरू पनि दंग भए र उसको तारिफ गरे । उसका आमाबालाई पनि अचम्म लाग्यो । राजुले कसरी यस्तो राम्रो नम्बर ल्यायो भन्ने उनीहरूले थाहै पाएनन् ।
राजुको व्यवहार फेरिएको देखेर पनि उनीहरू छक्क परे । किनकि राजुले आफ्नो कोठा सफा गर्ने, कापी किताब मिलाउने, लुगा स्याहार्ने आदि सबै काम आफैले गर्न थालेको थियो । उसको बोलीबचन पनि नम्र भएको थियो । ऊ अर्कै मानिस भएको थियो ।
सानो ख्याक विदा भएर गइसकेपछि पनि राजुलाई सबै होमवर्क ख्याकले नै गरेको हो भन्ने लागिरह्यो । तर वास्तवमा सानो ख्याकले होइन राजुले नै आफ्नो होमवर्क गरेको थियो ।
जुरेली चरी मीठो गीत गाउन नामी थिई । ऊ मेहनती पनि थिई । ऊ दिनभरि खेतबारीमा डुल्थी र बालीनालीलाई नोक्सान पुर्याउने किरा फट्यांग्राहरू खान्थी । किसानले खेत बारी जोतेको बेलामा जुरेली किसानको पछिपछि उडिरहन्थी र माटोबाट निस्केका किरा खान्थी । यसैले किसानहरू जुरेलीलाई माया गर्थे ।
एक दिन एक जना किसानको छोरा राजुले खेतबाट निस्केका किराफट्यांग्रा एउटा बट्टामा बटुल्यो । उसले बट्टाभरिको किरा जुरेलीलाई दिँदै जुरेलीसँग एउटा प्वाँख माग्यो । बट्टाभरि किरा देखेर जुरेली दंग परी । मेहनत नगरीकन यति धेरै किरा खान पाएकोले उसले खुशीसँग आफ्नो एउटा प्वाँख झिकेर राजुलाई दिई ।
भोलि पल्ट पनि राजुले बारीबाट किरा बटुल्यो र जुरेलीलाई बट्टाभरि किरा खान दियो र अर्को प्वाँख लियो । यसरी राजुले दिनदिनै किरा बटुलेर जुरेलीलाई दिन थाल्यो र जुरेलीले पनि आफ्नो प्वाँख राजुलाई दिनथाली ।
मेहनत नगरीकन किरा खान पाएपछि जुरेलीले बारीमा उडन र किरा बटुल्न छाडी । ऊ बिस्तारै अल्छी हुँदै गई । किरा खान बारीमा नआएपछि किसानहरूले पनि जुरेलीलाई माया गर्न छाडे । दिनदिनै राजुलाई प्वाँख दिन थालेकोले उसको प्वाँख पनि सकिँदै गयो । उसले पखेटाको प्वाँख पनि दिई । त्यसपछि ऊ राम्ररी उडन पनि सकिन ।
जाडो याम आयो । राजुले किरा बटुलेर ल्याउन पनि छाड्यो । जुरेलीको पखेटामा थोरै मात्र प्वाँख बाकी रहेकोले ऊ बेगले हावामा उडेर किरा समात्न पनि नसक्ने भई । बिस्तारै ऊ कमजोर हुँदै गई । उसको जिउमा उसलाई न्यानो दिन चाहिनेजति प्वाँख पनि बाकी थिएन । उसलाई जाडो लाग्यो । ऊ बिरामी परी । मेहनत नगरी सजिलोसँग बाँच्न खोजेकोमा पछुताउँदै ऊ मरी ।
कालु कौवाले आफूलाई निक्कै चलाख ठान्थ्यो । उसले बनको माझमा अग्लो रुखमा गुँड बनाएको थियो । त्यो रुखमा ढुकुर, चिबे, सारौँ, टोकटोकेजस्ता चराहरूले पनि गुँड बनाएका थिए । काले कौवाको गुँड सबैभन्दा माथि रुखको टुप्पामा थियो । कसैले गुँडमा भर्खर फुल पार्न थालेका थिए भने कसैले कोरल्दै थिए । काले कौवाको फुलबाट भने चल्लाहरू निस्किसकेका थिए ।
बनको नजिकै गाउँ थियो । गाउँमा मन्दिर पनि थियो । काले कौवा दिनदिनै मन्दिरमा जान्थ्यो । मन्दिरको पेटीमा लस्करै मूर्तिहरू र तुलसीको महिरो थियो । मानिसहरू मन्दिरमा जाँदा ती मूर्तिहरू र तुलसीको पनि पूजा गर्थे । उनीहरूले महिरोमा धुप बत्ती बालेर फलफूल, रोटी र मिठाई प्रसाद चढाउँथे ।
काले मन्दिरमा गएर प्रसाद खान पल्केको थियो । ऊ सबेरै मन्दिर जान्थ्यो । मन्दिरमा आउने भक्तहरूले कौवालाई देख्दा शुभशुभ बोल भन्थे । मानिसहरू कौवा करायो भने कुनै न कुनै समाचार आउँछ भन्ने ठान्थे । यसैले उनीहरूले शुभ समाचार आओस् भनेर कौवालाई त्यसो भन्ने गर्थे ।
तर कालेको ध्यान मानिसको भनाइमा भन्दा उनीहरूले चढाएको प्रसादमाथि पुग्थ्यो । उसले मानिसहरू अलि टाढा भएको बेलामा बेगले उडेर ठोँडले प्रसाद टिप्थ्यो र परखाल वा नजिकैको रुखमाथि बसेर खान्थ्यो । कहिलेकाहीँ उसले दुना बहुतामा राखेको प्रसाद भाँडैसँग उचालेर पनि लैजान्थ्यो । गुँडमा चल्ला निस्केपछि भने उसले मन्दिरमा भेटाएको प्रसाद गुँडमै लैजान थालेको थियो ।
एक दिन काले कौवा मन्दिरमा पुग्दा मानिसहरूको निक्कै भिड देख्यो । त्यो दिन मन्दिरको वरिपरि लाखबत्ती बालेको रहेछ । तुलसीको महिरो माथि पनि बहुतामा बत्ती बलिरहेको थियो । बहुतमा हलुवा प्रसाद देखेर काले लोभियो । आफ्ना चल्लाहरूलाई हलुवा ख्वाउन उसलाई मन लाग्यो । उसले भिडलाई बेवास्ता गरेर महिरोमाथि बसेर हलुवा टिप्न खोज्यो । तर उसको मुखमा थोरै हलुवा आयो । यसैले उसले हलुवाको बहुतालाई ठोँडले च्याँप्यो र गुँडतिर उड्यो ।
बत्ती बलिरहेको बहुता कौवाले लगेको देखेर मानिसहरू डराए । गाउँमा धेरै घर र गोठहरू खरले छाएका थिए । घर वा गोठको छानामाथि बसेर कौवाले प्रसाद खाँदा खरको छानामा आगो लाग्नसक्थ्यो । यसैले मानिसहरूले हाहा भन्दै कौवालाई केही परसम्म लखेटे । तर कौवा बनतिर लागेपछि उनीहरू फर्के ।
काले कौवा बहुता बोकेर सोझै बनतिर लाग्यो । हावाको बेगले गर्दा बहुताको बत्ती निभिसकेको थियो । तर त्यसमा आगोको फिलिंगो बाकी थियो । कालेले बहुता गुँडमा बिस्तारै बिसायो । चल्लाहरू भोकाएका थिए । तिनीहरूले मुख बाउँदै खानेकुरा माग्न थाले । कालेले हतारहतार तिनीहरूलाई हलुवा ख्वाउन थाल्यो ।
चल्लाहरूलाई हलुवा ख्वाउने सुरमा उसले बहुताको बत्तीको फिलिंगो गुँडमा खसेको चालै पाएन । उसको गुँड सुकेका घाँसपात र झिँजाहरूले बनेको थियो । फिँलिँगोले ती सुकेका घाँस र झिँजालाई टिप्यो । गुँडबाट धुवाँ निस्कन थालेपछि कालेकौवा आत्तियो । उसले का का गर्दै चिच्याउँदै वरपरका चराहरूसँग गुहार माग्न थाल्यो ।
त्यो रुख र वरिपरिका अरु रुखमा गुँड बनाएर बसेका चराहरू उडदै कौवालाई मदत गर्न आए । उनीहरू कौवाको गुँडमा आगो लागेको देखेर आत्तिए । आगो फैलियो भने त्यो रुखमा मात्रै होइन वरपरका रुखमा गुँड बनाएर बसेका चराहरूको फुल र चल्लाहरू पनि डढथे । यसैले सबै चराहरू आत्तिए । उनीहरू रुन कराउन थाले ।
त्यो रुखको फेँदको टोड्कामा न्याउरीमुसाको परिवार बस्थ्यो । चराहरूको हल्ला सुनेर न्याउरीमुसा बाहिर आयो । उसले रुखमाथि धुवाँ देख्यो । उसले कुरा बुझिहाल्यो । ऊ दगुर्दै गुण्टे हात्तीकहाँ पुग्यो । गुन्टे पोखरीमा खेल्दै थियो । उसले सुँडमा पानी भरेर आफ्नो जिउमाथि छम्किरहेको थियो । न्याउरीमुसाले गुन्टेलाई बनमा आगो लाग्नै आँटेको कुरा सुनायो र मदत माग्यो ।
बनमा आगो लाग्यो भने गुन्टेको परिवारको पनि ललहबिलह हुने थियो । बनमा आगो लाग्ने कुरा सुनेर ऊ पनि आत्तियो । उसले तुरुन्तै आफ्नो सुँडमा सकेसम्म धेरै पानी भर्यो र कौवाको गुँडतिर दगुर्यो ।
कौवा बस्ने रुखमा पुग्दा गुन्टे हात्तीले कौवाको गुँडमा आगो बलिरहेको र चल्लाहरू भुइँमा चीँ चीँ गरिरहेको देख्यो । उसले आफ्नो सुँड गुँडतिर फर्काएर सकेसम्म बल गरेर पानीको फोहोराले आगो निभाउन खोज्यो । उसको सुँडमा भएको सबै पानी रित्तिँदा पनि गुँडबाट धुवाँ आउन छाडेन । ऊ फेरि दगुर्दै पोखरीमा पुग्यो र सुँडमा पानी भरेर ल्यायो । यसरी धेरै पटक पानी ल्याउँदै उसले आगो निभायो ।
गुन्टे हात्तीले बनलाई आगोबाट जोगाएकोमा बनका चराहरूमात्रै होइन अरु जानवरहरूले पनि हात्तीको ठूलो गुन माने । उनीहरूले गुन्टेलाई फुलमाला लगाइदिए । गुन्टेलाई मन पर्ने उखु, केरा, मेवा आदि फलफूल उपहार दिए । गुन्टे पनि दंग पर्यो ।
सानेपा, २०६२ मंसिर २० गते ।
भोलि मेरो जन्म दिन हो । मलाई भोलि मेरो स्कुलका साथीहरूले अचम्मको उपहार दिन्छु भनेका छन् । त्यो अनौठो उपहार के होला भनेर जान्न मलाई निक्कै खुल्दुली लागेको छ । कहिले भोलि होला भनेर म आत्तिएको छु ।
मेरो नाम शैली हो । तर मलाई साथीहरूले मिस स्लो भन्छन् । म जहिले पनि स्कुलमा ढिलो पुग्छु । यसैले होला स्कुलमा सर र मिसहरूले पनि मलाई स्लो भनेर बोलाउन थाल्नु भएको छ । तर मलाई स्लो भनेको कत्ति पनि मन पर्दैन ।
म सानो कछुवा हुँ । मेरो घर फेवातालको छेउमा छ । मेरो स्कुल तालको पाल्लो छेउमा छ । स्कुलबाट फर्कने बित्तिकै मलाई तालमा पौडी खेल्दै सानासाना माछा समातेर खान मन लाग्छ । तर आमाले मलाई खेल्न जान दिनुहुन्न सँधै पढ पढ भनिराख्नुहुन्छ ।
म सबै साथीहरूभन्दा पहिले स्कुलमा पुग्न चाहन्छु । तर मेरा हातगोडा छोटाछोटा छन् । जति छिटो दगुर्न खोजे पनि साथीहरूले मलाई उछिन्छन् । पहिलो पिरियडको अंग्रेजी कक्षामा म सँधैजसो ढिलो पुग्छु । त्यसैले अंग्रेजी विषयको जाँचमा थोरै नम्बर पाउँछु ।
म जाँचमा कहिले पनि फेल भएको छैन । सबै विषयमा राम्रै नम्बर ल्याउँछु । तर अंग्रेजीमा धेरै कमजोर भएको हुनाले कक्षामा राम्रो पोजिसन ल्याउन सक्तिन । जति मेहनत गरे पनि कक्षामा राम्रो पोजिसन ल्याउन सकेन भनेर आमा सँधै पिर मान्नु हुन्छ । मलाई खेल्न पनि जान दिनु हुन्न । मलाई ठीक समयमा स्कुल पठाउन कोसिस गर्नुहुन्छ । सबेरै खानेकुरा पकाउनु हुन्छ । मिठोमिठो खाजा राखेर स्कुल पठाउनु हुन्छ ।
मेरो जन्मदिनमा मैले मेरो कक्षाका सबै साथीहरूलाई निम्तो गरेको छु । आमाले मेरा सबै साथीहरूलाई पुग्ने सेल रोटी र अचार बनाउनु भएको छ ।
मेरा साथीहरूले मलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अनौठो र निक्कै कामलाग्ने उपहार दिए । म उनीहरूको गुन कहिल्यै बिर्सन सक्तिन । उनीहरूले मलाई पाँग्रा भएको जुत्ता उपहार दिएका छन् । त्यो जुत्ता लाएर अब म खरायोलाई पनि भेट्टाउन सक्छु । अब म सबैभन्दा पहिले स्कुल पुग्छु । कुनै पनि कक्षा छुटाउँदिन । सबै विषयमा राम्रो गर्छु अब आउने जाँचमा फस्ट पोजिसन ल्याउने कोशिस गर्छु । म फस्ट भएँ भने मलाई कम्प्युटर किनिदिन्छु भनेर आमाले भन्नु भएको छ ।
२०६२ मंसिर १५ गते ।